Iingcebiso zokusebenzisa uMbambisi | Amadoda aQinisekileyo
Iingcebiso zokusebenzisa imeko
El imeko Yimveliso ebalulekileyo yokuhambisa iinwele emva kokuzihlamba. Uhlobo ngalunye lweenwele lufuna imeko ethile, oko kukuthi, inezakhamzimba kunye nezinto ezisebenzayo ezilungiselelwe ukuhlangabezana neemfuno. capillaries.
Xa une imeko zilungisiwe, zinokuxhamla kubo bonke ubuhle bayo. Ukuhanjiswa, ukuthamba, ukukhanya, kunye nokulula xa ukudibanisa. Ukongeza, ivumela ukulungiswa kweendawo zokuqhekeka kunye nokuthintela iinwele ekunciphiseni. Ke ngoko kubalulekile ukuba ukhethe ifayile ye- imeko zilungelelaniswe ngokugqibeleleyo neemfuno zeenwele. Ngale ndlela unokuphinda ufumane iinwele eqaqambileyo kwaye uzele bubomi.
Akukho bungozi bunxulunyaniswa nokusebenzisa imeko, emva kokuhlamba nganye, nangona kunjalo kukho ezinye i ngcebiso ngokunxulumene nobuninzi bokusetyenziswa kuxhomekeke kuhlobo ngalunye lweenwele.
Ukufaka isicelo imeko, Okokuqala kufuneka uhlambe iinwele zakho ngeshampu yesiqhelo kwaye uyihlambe kakuhle ngamanzi ashushu. Amanzi agqithisileyo ayasuswa ngoncedo lwetawuli, eshiya pelo ndimanzi. I-conditioner iyasetyenziswa kwizinwele zonke, ukuqala kwiziphelo kunye nokusebenza ukuya kwi isikhumba ulusu.
Zenziwe imasajes entlonzeni ukuze izinto ezisebenzayo zemveliso zingene kakuhle. Makusebenze ixesha elibonisiweyo kwileyibhile. Emva koko ihlanjululwa kunye amanzi ininzi ngaphandle kokurabha nzima kakhulu. Ukuba uneenwele ezinde, i-conditioner iyasetyenziswa kwaye isasazeka ngaphezulu kweenwele zonke. pelo ngoncedo lwekama.
Ngale ndlela i mane ithatha ithuba lazo zonke izinto ezenziwayo ngesixhobo sokulungisa imeko kwaye ihlala igcwele amanzi. Njengalo naluphi na olunye ukhathalelo, kubalulekile ukuba iinwele ziphumle xa usebenzisa i imeko yonke imihla. Kuyacetyiswa ukuba iinwele ziphumle ubuncinci usuku olunye ngeveki. Ke ngoko, iinwele zihlanjwa kuphela ngeshampu kwaye emva koko ziyakanywa kakuhle ukuze kususwe zonke iintsalela zeemveliso zeenwele ezigcina zanda kuwo. isikhumba ulusu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Amadoda aQinisekileyo » Ukunyamekela » Iingcebiso zokusebenzisa imeko
Iingcebiso zokuthambisa iindevu
Iingcebiso zokususa izangqa ezimnyama ngecephe elibandayo